Akụkọ - Nhazi ọnụ ụzọ YALIS Na 2021
Ọgba aghara nke COVID-19 mere emeela ka ụlọ ọrụ ghara ịga n'ihu n'ìhè n'ọgwụgwụ ọwara ahụ, kama ha na-awagharị n'oké mmiri iji chọta ụzọ ha ga-esi pụọ. —— nke ụlọ ọrụ azụmahịa nke European Union na China
Na mbido 2020, COVID-19 malitere. Ka ọ dị ugbu a, ọrịa zuru ụwa ọnụ ebutela ntiwapụ nke anọ. Mwepụta nke ọgwụ mgbochi bụ nnukwu ozi maka ọgụ megide ọrịa na -efe efe, ife nke anọ nwere ike bụrụ agha ikpeazụ. Otú ọ dị, mmetụta ga-adịrịrị anya. Maka nke a, China ewepụtala usoro mmepe mgbasa ozi abụọ. Nke a ga -enyere China na akụnụba ụwa aka ịmaliteghachi.
Enwere ike ikwu na site na 2020 ruo ugbu a, anyị na -anọkarị n'ọgba aghara, onye na -ahụ mkpebi siri ike na onye na -ahụ ọgba aghara. Nke a emepụtala ọnọdụ na-emebi ala na ụlọ ọrụ dị iche iche gburugburu ụwa na 2020 na 2021. Maka ụlọ ọrụ, ọdịnihu ga-adị ka ahịrị kwụ ọtọ naanị ma ọ bụrụ na ha lee anya nke ọma.
N'okpuru echiche a, ikike mmepụta YALIS na 2020 enwetala mmụba na-agbanwe agbanwe.
Na 2020, ngwaike ọnụ ụzọ YALIS enwela ihe ịga nke ọma na mmepụta mkpokọta na ahịa mkpokọta, nke mụbara site na 108% na 107% ma e jiri ya tụnyere 2019. Ọnụ ụzọ profaịlụ na -eme mkpọchi usoro ọtụtụ, usoro enweghị ngwụcha, usoro enyo enyo dị warara na -emechi mkpọchi GUARD usoro, na okpokoro ọnụ ụzọ okomoko nke YALIS mepụtara n'onwe ya, ndị ahịa hụrụ ya n'anya wee bụrụ ndị pụtara ìhè na ụlọ ọrụ ngwaike ụzọ.
N'oge gara aga, ahịa ngwaike ọnụ ụzọ ụlọ na-agbaso atụmatụ yiri iwebata, mgbaze, ịmịkọrọ na iwepụta ihe ọhụrụ. Atụmatụ a na-enye aka n'ezie igwu uru onye na-eme mbubreyo n'ụzọ ụfọdụ. Otú ọ dị, ka ohere ịchụkwudo na-aga n'ihu na-ebelata, ọ ka dị ntakịrị.
N’afọ 2021, ụlọ ọrụ ngwaike ụzọ ga -emebi ntụkwasị obi, mezie mmezighị emezi n’ime ihe ọhụrụ, lee nna, ngwa ngwa karịa ka ahịa na -eche, ka ha wee nwee ike ịghọta ụda ahịa.
Na ahịa ụlọ na mba ụwa a na -atụghị anya ya, mkpa onye ọrụ bụ nke mbụ. Yabụ, na -eche ọkwa ọhụrụ, ụkpụrụ ọhụrụ, ihe ịma aka ọhụrụ na ohere ọhụụ, YALIS ewepụtala nnukwu atụmatụ na ọhụụ ọdịnihu.
Na ọkara nke abụọ nke 2021, anyị ga -agbasi mbọ ike ịchọpụta ọtụtụ mkpa ndị ọrụ n'akụkụ dị iche iche nke ndụ na akụrụngwa ngwaike, ka anyị nọrọ n'ihu ahịa, na -ewusi ahụmịhe onye ọrụ ike nke ngwa ụzọ n'ọnụ ụzọ.
Gaa n'ihu were atụmatụ abụọ nke ijikọ ụwa ọnụ na akpaaka mmepụta dị ka isi mmepe. N'otu aka, ọ guzosiri ike dị ka onye na -eweta ihe ngwọta ngwaike ọnụ ụzọ ọkachamara; N'aka nke ọzọ, YALIS gara n'ihu ịgbasa ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ na -eduzi njikwa ngwaahịa siri ike karị. Na 2021, ikike mmepụta ga-aga n'ihu na-eto, mbupu ahụ ga-adị ngwa ngwa, yana ọrụ ka mma maka ndị ahịa dị elu.
N'okporo ụzọ ịbụ onye nrụpụta akụrụngwa ngwaike nke ụwa, YALIS nọ na-aga n'ihu. Site na asọmpi ahịa na -esiwanye ike na mgbanwe ngwa ngwa, YALIS emewokwa nzaghachi ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na YALIS na -eme mgbanwe maka mgbanwe ndị a, ọ na -ewusi ike nke ya ike. N'ọdịnihu, gịnị ka YALIS ga -ewetara anyị? Ihe ijuanya kwesịrị ịtụ anya.
Oge ezipụ: Mee-20-2021